LG ကသူ့ရဲ့ LG G4 မျက်နှာပြင်ကိုဗွီဒီယိုအသစ်နဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ် Androidsis
LG ကသူ့ရဲ့ LG G4 မျက်နှာပြင်ကိုဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုနဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်
LG သည်၎င်း၏အထင်ကရအသစ်ဖြစ်သော LG G4 ကိုအများပြည်သူထံတင်ပြရန်ရက်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။ 28ပြီ ၂၈ ရက်သည်ပြက္ခဒိန်၌ကိုရီးယားကုမ္ပဏီက၎င်း၏ကြီးမားသော terminal ကိုပြသမည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ထိုပွဲကိုကျင်းပရန်ရက်သတ္တပတ်များစွာကျန်သေးသော်လည်းတောင်ကိုရီးယားမှထုတ်လုပ်သူသည်မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုများဖြင့်ဖောင်းပွသည့်နေ့ရက်များကိုဖန်တီးလိုသည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ယိုစိမ့်မှုတွေကြောင့်အနာဂတ် LG ဖုန်းအကြောင်းအားလုံးနီးပါးသိပြီးသားပါ။ ထို့ကြောင့်theပြီလ ၂၈ ရက်တွင်အံ့အားသင့်စရာအချက်မှာကြီးစွာသောမက်လုံးမဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လူမှုကွန်ယက်များတွင်၎င်း၏ထင်ရှားသောထုတ်ကုန်ကိုမြှင့်တင်လိုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် LG G28 ဖန်သားပြင်ရှိသည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ထိုမျက်နှာပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ G4 တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ကိုလူသိများသည် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင် 2560 x 1440 Pixel Resolution နှင့်အတူ Quad HD Resolution ။ ဤဖန်သားပြင်တွင်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကထုတ်လုပ်သော Quantum Display နည်းပညာ၊ အတိအကျဤနည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် 25% ထက်ပိုသောအလင်းနှင့် 20% ပိုသောအရောင်တိုးမြှင့်မှုအတွက်ခွင့်ပြုသည်.
LG မှထောက်ပံ့ပေးသောဒီဖန်သားပြင်အသစ်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းလူအများစုကသေချာမသိသေးပေ။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့ပထမဆုံးအကြိမ်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်မည်သည့်သံသယကိုမဆို ရှင်းလင်း၍ ရှင်းလင်းရန်အတွက်တိုယိုတာပုံစံဖြင့်ဗီဒီယိုကိုကုမ္ပဏီမှဖွင့်လှစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့အားစကားလုံးနှစ်လုံးကိုကြားပါ။ ၁ မိနစ်မျှသာကြာသောဤမြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုတွင်ထုတ်လုပ်သူသည် Quantum Display မပါဘဲ panel နှင့်ပုံနှင့်အခြားနည်းပညာနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
အဆိုပါ teaser ဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Quantum Display မပါသောမျက်နှာပြင်နှင့်အခြားတစ်ခုရှိသည်ကွာခြားမှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ LG G4 ၏မျက်နှာပြင်အသစ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲရောက်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရမည်။ ဒီမလာသေးဘူးဆိုရင် terminal ကိုAprilပြီလ ၂၈ ရက်အထိစောင့်ရ ဦး မှာပါ၊ ကင်မရာလိုပဲ၊ ၎င်းသည်မကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစာရွက်ပေါ်တွင် Android device တစ်ခုတပ်ဆင်မည့်အကောင်းဆုံးကင်မရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ Terminal ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ထွက်ပေါ်လာမည့်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်ထိုနေ့၌ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းကြမည်ဖြစ်ပြီးလာမည့် LG flagship နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကိုလက်တွေ့ကျကျတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သင်, သငျသညျကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ် terminal ကိုကြိုက်တယ် ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG ကသူ့ရဲ့ LG G4 မျက်နှာပြင်ကိုဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုနဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်
Sebastian Navarro Panzetta ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးကောင်းပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် LG G4 သည် Snapdragon 808 ပရိုဆက်ဆာဖြင့်စမ်းသပ်မှုများစွာတွင်မကြာသေးမီကမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ဆိုပါကဥပမာ - သိုးသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က standard ddr3 ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုပရိုဆက်ဆာသည်၎င်းကိုထောက်ပံ့သည် 810 နှင့်မတူပါက Snapdragon4processor နှင့် LG G810 ပင် LG G FLEX4HTC One M2 တောင်မှထိပ်နှင့်အဝေးတွင်ပင်ရှိသည့် Sony ဖုန်းဖြင့်သယ်ဆောင်သွားသည်ကိုတွေ့ရမည့် ddr9! ထိုနည်းတူစွာပင်စတင်ရောင်းချချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်မည်မျှပင်ထိရောက်မှုရှိသည်ကိုမည်မျှပြောဆိုသည်ဖြစ်စေ 808 နှင့်အတူထွက်ပေါ်လာပါက၎င်းသည်နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းဖြစ်ပြီးယနေ့ Samsung Galaxy နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်ကိုပိုမိုသိရှိရန်ထင်ရှားသည်။ S6 သည်ပရိုဆက်ဆာပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုမှတ်ဉာဏ် ufc သာမကအခြားအရာအားလုံးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ငါ LG ကစိတ်ပျက်ပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ် !!!
Sebastian Navarro Panzetta အားပြန်ပြောပါ
(FOR ME) အရေးအကြီးဆုံးကတော့ 4K ကိုဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ပြီးဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ဖို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာအပူချိန်ပြtoနာကြောင့် ၅ မိနစ်ထက်ပိုပြီး 4k ကိုမှတ်တမ်းတင်မထားလို့ပဲ။ အကယ်၍ ၎င်း5ပရိုဆက်ဆာနှင့်အနွေးဓာတ်နည်းပါကကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါမည်။ သေချာတာပေါ့၊ တစ်ယောက်စီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအမြန်ဆုံးမလိုအပ်ဘူး။ အနာဂတ် play808 emulator တစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုအရာမျိုးကို want အသုံးပြုလိုလျှင်မဟုတ်ပါ
ဒါကြောင့်သူတို့က G2 အတွက် Lollilop အကြောင်းမေ့သွားကြတယ်၊ သူကပြောတဲ့ကုမ္ပဏီတွေက ၃ လတခါ ၄ င်းတို့၏ကောင်းကျိုး၊ မော်ဒယ်အသစ်များကိုသာရှာဖွေသည်၊ သူတို့၏အတိတ်မော်ဒယ်များကိုမထောက်ပံ့ပါ။
Samsung Galaxy J5, Snapdragon5ပါသော ၅ လက်မမျက်နှာပြင်
Sony Xperia Z4 တွင်သတ္တုကိုယ်ထည်နှင့်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်